हौसला Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
कुनैबेला भ्यागुताहरुको समूह एउटा जंगलको बाटो हुँदै कतै गईरहेको थियो । जंगलको त्यो बाटो निकै खतरनाक थियो । खासगरी भ्यागुताजस्ता साना जीवहरुको लागि त्यो खतरनाक थियो किनकी बाटोमा निकै गहिरा खाल्डाखुल्डीहरु थिए । भ्यागुताहरु निकै होशियारीपूर्वक त्यो बाटो पार गर्दै थिए । यत्तिकैमा दुईवटा भ्यागुताहरु एकैचोटी एउटा खाल्डोमा खसे । उनीहरुको लागि खाल्डाृ निकै गहिरो थियो । त्यो खाल्डोबाट निस्कन लगभग असंभव नै थियो ।
आफ्ना साथी त्यहाँ खसेपछि सबै भ्यागुतोहरुलाई निकै चिन्ता लाग्यो । उनीहरुले आफ्ना खसेका साथीहरुलाई कुनै पनि हालतमा निकाल्न सक्दैनथे । खसेका दुवै भ्यागुताहरुले आफ्नोतर्फबाट बाहिर निस्कन निकै प्रयास गरिरहेका थिए तर जति उफ्रे पनि उनीहरु अलिकति माथी आउँथे अनि फेरी तल खस्दथे । उनीहरुको यो दशा देखेर माथी रहेका साथीहरु पनि निकै दुःखी थिए । उनीहरुले आफ्ना साथीको हालत देखेर निकै माया लाग्थ्यो तर के गर्नु ? उनीहरु पनि विवस थिए । साथीहरुको प्रयास खेर मात्र गईरहेको थियो । हुँदा हुँदा तल रहेका भ्यागुताहरु उफ्रिँदा उफ्रिँदा बेलबेलामा बेहोस पनि हुन्थे अनि फेरी जागेर कोशिस गर्थे । माथी रहेका भ्यागुताहरुले हार मान्दै भन्न थाले , " साथीहरु तिमी माथी आउन कोशिस नगर तिमीहरुको मृत्यु अब निश्चित छ बरु शान्तसँग त्यहीँ बस । बेकारमा उफ्रेर दुःख नपाउ ! "
यो कुरा तलका भ्यागुताहरुले सुनेकै थिएनन् त्यसैले उनीहरु आफ्नो पुरापुर कोशिसका साथ उफ्रिँदै माथी आउन प्रयास गर्दै थिए ।
माथीका भ्यागुताहरुले फेरी भन्न थाले,
"तिमीहरुको मृत्यु नजिक छ साथी बेकारमा उफ्रिएर दुःख नगर !"
फेरी पनि तलका भ्यागुताहरुले केही सुनेका थिएनन् त्यसैले उनीहरु अझ जोडका साथ उफ्रिन थाले । यो क्रम घण्टौंसम्म चल्यो ।
माथीका भ्यागुताहरुले भनिरहेकै थिए ,
"साथी हो दुःख नगर तिमीहरुको मृत्यु निश्चित छ ! "
यसपटक भने एउटा भ्यागुतोले यो कुरा सुन्यो अनि उ साँच्चिकै त्यसपछि उठ्न सकेन र त्यही मर्यो ।
अब त्यहाँ एउटा मात्र भ्यागुता रह्यो । माथीका भ्यागुताहरुले अघिकै कुरा दोहर्याईरहेका थिए । तर केहिछिनमै त्यो भ्यागुतो माथी आउन सफल भयो । सबै भ्यागुताहरु खुशी पनि भए अनि एक किसिमको चमत्कार नै भएजस्तो लाग्यो उनीहरुलाई ।
माथी आएको भ्यागुतोले सबै साथीहरुलाई आफ्नो उत्साह बढाएकोमा धन्यवाद दियो ।
सबै भ्यागुताहरु छक्क परे , किनकी उनीहरुले त उत्साह दिएका थिएनन् । बरु तिमीहरुको मृत्यु निश्चित छ भनेका थिए ।
वास्तवमा बाहिर निस्केको भ्यागुतोले कान सुन्दैनथ्यो । उसलाई लागिरहेको थियो कि आफ्ना साथीहरुले उसलाई " तिमी बाहिर आउन सक्छौ ! " भनिरहेका छन् । साथीहरुको त्यही हौसलाका कारण उ बाहिर आउन सफल भयो अनि अर्को भ्यागुतो साथीहरुले तिमीहरु बाहिर आउन सक्दैनौं भनेको सुन्दा सुन्दा उसले साँच्चिकै हिम्मत हार्नाले उसको मृत्यु भएको थियो ।
त्यसैले हामीले पनि कसैले निराश बनाउँन खाज्यो भने त्यसलाई सुनेको नसुन्यै गरेर अघि बढ्नुपर्छ अनि मात्र हामी कठिनभन्दा कठिन काममा पनि सफल बन्न सक्छौं ।